बिहेपछि हनिमुन सुरु हुनै लाग्दा दुलाहालाई खोकी लाग्यो,डराएकी दुलहीले गरिन् यस्तो काम,सबैको उड्यो होस! |
बिहेपछि हनिमुन सुरु हुनै लाग्दा दुलाहालाई खोकी लाग्यो,डराएकी दुलहीले गरिन् यस्तो काम,सबैको उड्यो होस!
October 18, 2021 adminLeaveaComment on बिहेपछि हनिमुन सुरु हुनै लाग्दा दुलाहालाई खोकी लाग्यो,डराएकी दुलहीले गरिन् यस्तो काम,सबैको उड्यो होस!
दुलहाको खुशीको कुनै ठेगाना थिएन । आखिर, यो हनीमून थियो । दुलही पनि खुसी थिइन् । अचानक दुलहालाई खोकी लाग्यो । यो पछि के भयो ? आश्चर्यजनक छ । दुलहीले शौ चको बहाना बनाएर कोठा छोडेर भा गि न् । दुलही विवाहपछिको पहिलो रात खाटमा दुलहीको लागि पर्खिरहे ।***** यो समाचार को पुरा भिडियो हेर्न यहाँ तल क्लिक गर्नुहोला *****
जब दुलही लामो समयसम्म आइनन्, उनको मनमा केही शंका थियो । यसपछि अनुसन्धान सुरु भयो । जब दुलहाका आफन्तहरूले दुलहीको माइतिमा फोन लगाए, उनी त्यहाँ पुगिन् भनेर थाहा पाए । यो सबै मामलामा, कोरोना खलनायक भएर निस्कियो ।***** यो समाचार को पुरा भिडियो हेर्न यहाँ तल क्लिक गर्नुहोला *****
यो भारतको घटना हो । त्यहाँ राजस्थानस्थित धनबाद जिल्लाको दक्षिण टुंडीको बेगोनोरिया पञ्चायतको गाउँमा बस्ने उक्त युवकको बरवद्दा पुलिस क्षेत्रको गाउँमा बिहे भएको थियो । मे १ मा, विवाह पछि, बेहुला नयाँ दुलही लिएर घर आए । परम्परागत रीतिथितिहरूको साथ दुलही घर भित्राइएको थियो । सबै दिनको समयमा राम्रो थियो ।***** यो समाचार को पुरा भिडियो हेर्न यहाँ तल क्लिक गर्नुहोला *****
रातको ११ बजेतिर, जब दुलाहा घरको कोठामा दुलहीको नजिक आईपुगे । दुलाहा खोक्न थाले यस पछि, दुलही डराइन् । उसले दुलहालाई कोरोना भएको थियो कि जस्तो लाग्यो। दुलाहासँग गएमा त उनी पनि सं क्र मि त हुनेछिन् । यसपछि हिम्मत गर्दै शौ च गर्ने बहानामा घरबाट निस्कीइन् र आफ्ना भाइलाई बोलाइन् । फोनमा भाइलाई कसैलाई यो कुरा नभन्नको लागि पनि निर्देशन दिइयो । ती भाइ एक गाडिका साथ आइपुगे र दुलही उनको घरमा पुगिन् ।***** यो समाचार को पुरा भिडियो हेर्न यहाँ तल क्लिक गर्नुहोला *****
दुलहाको घरमा धेरै मानिसहरू भाइरल ज्वरोबाट ग्रस्त थिए । सबै परिवारका सदस्यहरूले नजिकको उपस्वास्थ्य केन्द्रमा कोरोना जाँच पनि गरे । तर संयोगवश, साँझमा, छिमेकी नन्द र उनकी बहिनीले दुलहीलाई जिस्काएर भने की उनीहरु त्यहाँ बसिरहे सबैलाई कोरोना हुनेछ । सले दुलहीको मनमा डर उत्पन्न भयो । अनि दुलही त्यहाँबाट एकाएक अलप भइन् ।***** यो समाचार को पुरा भिडियो हेर्न यहाँ तल क्लिक गर्नुहोला *****
पुरुषका लागि बन्यो गर्भनिरोधक सुई,एक पटक लगाए १५ वर्ष बच्चा नहुने।यसरी गर्नुहोस् प्रयोग
आज फेरी घट्यो सुनको मुल्य, तिन दिन देखी लगातार ओरालो लाग्दै सुनको मुल्य कतिमा कारोबार हुदैछ आज?(हेर्नुहोस्)
बिधालय बन्द हुने बारे प्याब्सनले लियो यस्तो निर्णय
रुपा सुनार र घरबेटी प्रकरणमा एक पछी अर्को ड,रलाग्दो यस्तो के हुँदै छ?खुल्यो रहस्य (भिडियो हेरौ)